7 Shabakado si aad u soo dejiso Moodello Powerpoint weyn | Abuurista khadka tooska ah
Maanta waxaan haysannaa kheyraad aan dhammaad lahayn iyo intii dhawr sano ka hor way adkayd in loo dhowaado arrimo tayo sare leh, arimuhu way isbadaleen si hadii aan ogaano sida loo baadho aan u helno qaar tayo fiican leh. Taasi waa sababta aan kuu tusineyno liiska boggaga aad kala soo bixi karto arrimo si aad dhibic gaar ah u siiso soo bandhigistaada.
Iyo inkasta oo runta la sheego Google ayaa sii adkeyneysa Microsoft, Powerpoint wuxuu sii wadaa hogaaminta bandhigyada si xitaa barnaamij isku mid ah, iyo inbadan oo kamid ah xalka Microsoft 365, waxaan kuheysan karnaa feylal gacanta aan kujirno si aan u siino qoraalka sida kujirta dhacdooyinka shirkadaas, kulamada ama bandhigyada macaamiisha baahan tahay taas oo noqon karta inay nala shaqeyso ama aan adeegsano shey.
1 Microsoft 365 arrimo
3 Awood sheegasho
5 Kaararka ama Isqorista ku yaal Freepik
7 Isboortiga Carnival
Microsoft 365 arrimo
Sida la mid ah Excel ama Word, laftiisa Microsoft waxay na siisaa arrimo badan oo kala duwan sidaa darteed xitaa uma lihin baahida loo qabo inaan ku marno soo dejinta bilaashka ah ee soo jeedimahaas. Noocyadan kala duwan waxaan leenahay taxane dhan oo qaybood ah oo noo oggolaan doona inaan ka tagno waxa noqon doona soo bandhigida wax soo saarka sida mashruuca shahaadada ugu dambeysa.
Xidhiidhka la siiyay waxaad ka heli kartaa tusaalooyin Powerpoint ah oo nooc walba leh si aad ugu isticmaasho sawirada sawirada, joornaalada, jadwalka taariikhda, waraaqaha, shahaadooyinka, miisaanka, menus, ama xitaa boodhadhka. Taxanahan qaab-dhismeedka aasaasiga ah waxaa loo isticmaali karaa in lagu siiyo taabashadaas dib-u-soo-bandhigga soo-saarka ama dhammaan sawir-gacmeedka moodellada moodada ah.
Microsoft Waxay innoogu tusaysaa buug-yare weyn oo aynaan seegi karin Oo haddaan qiimeyno soo jeedinta adeegga daruuriga ah oo lagu daro dhammaan barnaamijyada otomatiga ee xafiiska, it 9,99 oo ay ku kici karto bil kasta, oo lagu yareeyo lacag bixinta sannadlaha ah, waxay u fiicnaan kartaa dinaar kasta oo euro ah.
Muunadaha sheybaarada Microsoft - Web
cunt Slidesgo waxaan aadeynaa laba shey oo tayo sare leh oo bilaash ah iyada oo aan loo baahnayn in la isdiiwaangaliyo. Xaqiiqdii waan soo dejisan karnaa gundhig dhan oo ah qaabka Powerpoint (tusaale ahaan), si aad uga fiirsato tayada ay soo bandhigtay degelkan qaab-dhismeedka bilaashka ah ee Powerpoint.
Xitaa waxay bixisaa suurtagalnimada in lagu soo dejiyo iyaga loogu talagalay Google Slides Haddii kale, waxaan dooneynaa inaan doorto Powerpoint ama aanan marin u helin barnaamijka, maadaama faa'iidada ugu weyn ee xalka Google ay tahay inay lacag la’aan tahay, illaa iyo inta aan heysano koontada Google. Ku saabsan Slidesgo, waa degel si aad ah loo soo bandhigay (sidee bay u noqon kartaa si kale), taas oo aan ku hayno xagga sare ee Isbaanishka noocyada kala duwan ee noocyada kala duwan ee ka imanaya kuwa caanka ah, waxbarashada, ganacsiga, suuqgeynta, daawada, ujeedooyinka badan iyo faahfaahinta.
En mid kasta oo ka mid ah tusaalooyinka Powerpoint-ka ee bilaashka ah xitaa waxay na siinayaan qalab tusaalooyinka la xiriira si aan u helno tan gaarka ah ee la socota baahideena ama mawduuca naqshadeynta aan dooneyno inaan ku xoojino mashruuca ama adeegga la bixiyay. Waxaan iska diiwaan gelin karnaa si bilaash ah si aan u galno soo degsashada arrimo badan.
Muqaal - Web
Estamos kahor websaydh ku qoran Ingiriis, laakiin taasi waxay noo oggolaan doontaa inaan helno waxyaabo badan oo tayo sare leh oo lagu dhejiyo Powerpoint. Mid kasta oo ka mid ah bogagga template waxaan kala soo bixi doonnaa feyl ZIP ah oo aan ka heli doonno tusaalaha Powerpoint ee adeegsiga dambe.
Dusha sare waxaan ku leenahay menu leh qaybaha soo dejinta template sida ganacsiga, ugu yar, xirfad, waxbarasho, casri ah ama hal abuur leh. Mid kasta oo ka mid ah wuxuu na geynayaa sheybaarada kooxaysan marka aan gujino midna waxaan heleynaa dhammaan macluumaadka, oo Ingiriis ah, oo leh tirada bogagga, qaabka iyo xitaa macluumaadka la xiriira vector-ka sawirradiisa.
Hadday taasi tahay wuxuu nagu ridayaa bog xayeysiisyo badan leh, laakiin haddii aan awoodno inaan iska indhatirno, waxaan awoodi doonnaa inaan ku raaxeysanno arrimo tayo sare leh ee barnaamijka Microsoft. Dabcan, inaan ku jirno Ingiriis ma heleyno wax aan ka ahayn inaan shaqsiyaadka qoraalka la gaaryeelo; wax waliba dhici lahaa haddii aan ku soo dejino Isbaanish. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan boggan ayaa ah, in kasta oo ay nagula talinayaan inaan isdiiwaangalino, uma baahnin inaan ka tagno emayl si aan u adeegsanno qaababkan tayada leh.
Awood sheegasho - Soo dejiso Bilaash ah
Halkan, oo ka duwan labadii hore, haa taasi waa inaan isdiiwaan galino si aan u helno Tusaalooyinka bandhigga Powerpoint. Tani waxay sidoo kale ka dhigan tahay inaan ku raaxeysan doonno arrimo tayo sare leh oo ka kooban dhammaan qeybaha si aan u helno midka aan ugu baahan nahay mashruuc ama shaqo jaamacadeed.
Haa, waxay ku qoran tahay Ingiriis, laakiin macnaheedu maahan in xirfad yar aan kala soo bixi karno arrimo tayo sare leh. Dusha sare waxaan ku haynaa menu ku qoran af Ingiriis oo noo qaadaya Jaantusyada Powerpoint, Khariidadaha, Qaababka Powerpoint ama Formas, Qorshaynta tusaalooyinka qorshaha ganacsiga, Xogta & Shaxda xogta iyo garaafyada iyo Qoraallada iyo Jadwalka miisaska iyo qoraalka. Maaha inay u baahan tahay in la turjumo, laakiin ujeeddadeeda iyo ujeeddooyinkeeda ayaa si dhammaystiran loo fahmi karaa.
Markii aan horay u diiwaangashanay oo aan galnay, waxaan galnaa macluumaadka loo baahan yahay in xitaa la ogaado nidaamka midabka soo bandhigida ama cabirka mid kasta oo ka mid ah bogagga Degel xirfadle ah oo gacanta u geliya wax kasta oo aan raadineyno si aan si dhaqso leh u qiimeyn karno kahor inta aan soo degsanin astaamaha aan haysanno iyo in ay badan yihiin.
Model - Web
Kaararka ama Isqorista ku yaal Freepik
Freepik Weli waa mid ka mid ah goobaha soo dejinta ugu wanaagsan dhammaan noocyada sawirada, feylasha ama walxaha ay tahay in lagu sameeyo baahida loo qabo abuuritaanka garaafyada heerarka oo dhan. Dabcan, waxay kaloo leedahay kaarar ama bogag taasna waxay noo ogolaaneysaa inaan u isticmaalno inaan hadhow ku darno Powerpoint cusub oo la abuuray.
Xiriiriyaha aan hoosta ka bixinno waxaad ka heli kartaa hel noocyo kaladuwan oo roon inaad ku isticmaali karto dukumiintiyadaas la abuuray. Iyagu waa buug-yare buug-gacmeedyo oo aad ku isticmaali karto dhammaan kaararkaas oo ka kooban soo-bandhigidda aad u baahan tahay. Dabcan waxaan ku haysannaa bilaash, inkasta oo haddii aan dhex marno bilaashka bilaashka ah ee Freepik waxaan awoodi doonnaa inaanu helno qaybta qiimaha halkaas oo tayada bogagga ay si aad ah u fiicnaanayaan.
Iskusoo wada duuboo waxaan faallo ka bixinnaa maxaa yeelay haddii aan dooneyno wax si gaar ah u gaar ah, oo maahan waxa kumanaan sideena oo kale ah ay ka soo dejisan karaan adduunka, qaybtaas qiimaha leh ayaa laga yaabaa inay daneyneyso hadba baahidayada. Dabcan, haddii aan rukumo u nahay Freepik waxaan u adeegsan karnaa astaamo, astaamo, sawirro, dulqabadyo iyo waxyaabo kale oo badan.
Bogagga Freepik - Download
Kuwa kale Websaytka Ingiriisiga oo loogu talagalay dhammaan noocyada tusaalooyinka bandhigga taasna waxaa lagu gartaa iyadoo naloo muujiyo xitaa tii hore ama thumbnail ee shaxanka tirada bogagga ay ka kooban tahay. Haa, waa inaad isdiiwaangelisaa si aad u soo dejiso buugyaraha oo dhan sidii kale oo kale oo xiiso leh oo had iyo jeer aad gacanta ku hayso oo aad raadiso arrimo cusub.
Dhammaan qaybaha ayaa laga soo abaabulay koox dhinac ah suurto gal ah oo ay bixiso 24Slides. Waxaan iska qori karnaa koontadeena Google si aan uga helno buuggaaga wixii hadda ka dambeeya.
24jeex - web
Y waxaan ku dhammeynay degel ku yaal Isbaanish si aan u soo dejino arrimo tayo sare leh. Aad ayey ugu siman tahay tayada iyo waaya aragnimada Slidesgo, marka bogga ugu weyn waxaan ka arki karnaa dhammaan qeybaha la soo bandhigo sida ay u baahan tahay. Waxaan xitaa ku raadin karnaa arrimo midab ahaan ama aan u mari karnaa qaybaha "kuwa ugu qabow" sida dhiirigelinta, hal-abuurka, fudud, bilowga ama ganacsiga. Dariiq kaftan iyo raaxo badan oo lagu garto iyaga si dhakhso leh loogu aado waxa na xiiseynaya.
Boggan waxaan ku leenahay a noocyo kala duwan oo arrimo ah oo loogu talagalay Powerpoint Hadana haddii aad rabto inaad la socotid kuwa cusub ee soo kordhay, waad iska qori kartaa joornaalkooda si uu u noqdo kan ugu horreeya ee soo dejiya mid.
Sida kuwa kale, waxay na siisaa macluumaad xiiso leh sida tirada isbarbar dhigyada, tirada astaamaha aan wax ka beddeli karno ee aan ku hayno ama qaabka aan ku ogaanayno haddii waxaan ku toogan karnaa mid ka mid ah 4: 3 ama 16: 9. Waa inaan ka faalloonnaa in tusaalooyinka aad soo dejisan tahay sidoo kale loo isticmaali karo bandhigyada Google, marka kala duwanaanshaha ugu weyn si aan ugu soo jiidan karno mid ama barnaamij kale sida aan xiiseyneyno.
Un degel fudud taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan gacanta ku hayno dhamaan noocyada mawduucyada iyo tusaalooyin aad u casri ah oo aan ku muujin karno sida aan xirfad u leenahay ama xarrago ee habka gaarka ah ee aan u bixinno soo jeedinta qiimaha. Inay ku jirto Isbaanishka waxay siineysaa dhibicdeeda si aanan waqti badan ugu lumin turjumaanada.
Isboortiga Carnival - web
Kuwani waa Goobaha ugufiican ee Soodejiya Astaamaha Powerpoint, iyaguna waxay u shaqeeyaan Google Slides. Hadda si wax looga beddelo iyaga si loogu diyaariyo shaqadaas ama faylalkaas oo aad ku tusi karto dhammaan xirfadahaaga iyo tayadaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » habyaalada » Goobaha ugufiican ee Soodejiya Tusaalooyinka Powerpoint ee Hada